Falanqaynta Kulanka Sevilla Vs Barcelona Ee Horyaalka La Liga Spain
Home Falanqeynta Kulamada Falanqaynta Kulanka Sevilla Vs Barcelona ee Horyaalka La liga Spain
Barcelona ayaa Horyaalka la ciyaareysa Kooxda Sevilla kulan ka tirsan Horyaalka La Liga kaasi oo ka dhacaya Garronka Pizjuan Ramon Sanchez Stadium. Labada kooxba waxay kujiraan afarta ugu sareysa waqtigan waxayna raadinayaan guul kulankaan.
Sevilla:- Marcos Acuna iyo Lucas Ocampos ayaa haatan dhaawacan waxaana laga saaray kulankaan. Khadka dhexe hore ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic ayaa door muhiim ah ka ciyaaray kooxda Sevilla xilli ciyaareedkan waxayna u badan tahay inuu ku soo bilaaban doono kulankaan.
Barcelona:- Ronald Araujo ayaa ahaa daaficii ugu fiicnaa Barcelona xilli ciyaareedkan laakiin waxaa laga yaabaa inuusan soo kabsan karin waqtigan kulankaan. Philippe Coutinho, Ansu Fati, iyo Sergi Roberto ayaa ka soo kabsanaya dhaawac muddo dheer ah sidoo kalena waa inay fadhiistaan ​​kulankaan.
Sergio Busquets iyo Antoine Griezmann ayaa kursiga keydka fadhiyay kulankii Elche. Pedri ayaa wacdaro dhigay todobaadyadii la soo dhaafay sidoo kale waxay u badan tahay inuu qeyb ka ciyaaro kulankaan.
Barcelona ayaa rikoor fiican ka heysata Sevilla waxayna guuleysatay 36 kulan guud ahaan 57 kulan oo ay ciyaareen labada koox. Sevilla ayaa guuleysatay kaliya 10 guul oo ay ka gaareen Barcelona, ​​waxaana ay u baahan doonaan inay isbuucaan sii xoojiyaan
Kulankii hore ee labada koox wuxuu dhacay horaantii bishaan Copa del Rey wuxuuna ku dhamaaday si layaableh oo raaxo leh oo ay 2-0 ku badisay Sevilla. Barcelona waxay u tahay maalin murugo leh madama shaqo badan ay sugeyso kulankaan.
Previous articleFalanqaynta Kulanka Manchester City Vs West Ham United ee Premier League
Next articleFalanqaynta Kulanka Hellas Verona Vs Juventus ee Horyaalka Serie A Taliyaaniga